ကြံ့ခိုင်ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ | UniStar
Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/html/unistarmm.com/public_html/includes/menu.inc).
Heavy Duty Metal Protector Product Code: AMH
AMH သည် သံနှင့်သံကြိုးများ၊ စပရိန်များ၊ မူလီနှင့်နတ်များ၊ ၀က်အူများ၊ မော်တော်ဆိုင် ကယ်ချိန်းကြိုးများကိုသံချေးမတက်စေရန်၊ သံချေးများ ဖယ်ရှားရန်၊ သံချေး တက်နေ၍ အသံမြည် နေလျှင်ပြုပြင်နိုင်ရန် အတွက် အသုံးပြုရသည့် ဖြန်းဆေးဖြစ်ပါသည်။ AMH သည် Heavy Duty Multi-purpose ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်ပါ သည်။
Heavy Duty Degreaser Product Code: ADG
ADG သည် ဖိတ်စင်ပေကျံသည့် ဓါတ်ဆီချေး၊ ဒီဇယ်ချေးများမှတဆင့် အချိန်ကြာလာလျှင် မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အစွန်းအထင်းဖြစ်ပြီးချွတ်ရခက်သည့် အစေးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် Heavy Duty သုံးအစွန်းချွတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ADG သည် အစေးကပ်နေသည့် သံနှင့်သံမဏိ မျက်နှာပြင်များ၊ အင်ဂျင်၊ ဂီယာနှင့်စက်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်များ၊ ကား Workshop ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်များအပေါ်တွင် အလွယ်တကူဖြန်း၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Metal Protector Product Code: AMP
AMP သည် AMH ကဲ့သို့ပင် သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး သံနှင့် သံမဏိကိရိယာ များကိုပြောင်လက်ချောမွေ့စေပါသည်။ AMP သည် လျှပ်စစ်ကြိုးများ၊ Fuel Ignition Systems များအတွက် ပိုသင့်လျော်ပြီး ပလတ်စတစ်များ၊ သရေကြိုးများ၊ အ၀တ်စများကို မပျက်စီးစေပါ။
Silicone Spray Product Code: ALS
ALS သည် သံမဟုတ်သည့် (Non-Metallic) မျက်နှာပြင်များဖြစ်သည့် နိုင်လွန်(Nylon)၊ ဖိုက်ဘာဂလက်စ် (Fiberglass)၊ ပလတ်စတစ်၊ သစ်သားနှင့် သားရေမျက်နှာပြင်များ ချောမွေ့မှုရှိစေရန် အသုံးပြုရသည့်ဖြန်းဆေးဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျက်နှာပြင် များခြောက်သွေ့ကွဲအက်ခြင်း၊ မှိုတက်ခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးပါသည်။
Power Foam Product Code: APF
APF သည် ကားအင်ဂျင်များတွင်ပါရှိသည့် ဆီပိုက်များ၊ Intake Valves များ၊ Throttle Plates များ၊ Fuel Injectors များ၊ Combustion Intakes များ၊ Catalytic Converter များ၊ အိပ်ဇောပိုက် Emission Control Device များသံချေးများပိတ်ဆို့လျှင် အလွယ်တကူဖြန်း၍ သန့်စင်ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ် နှင့် ကွန်ပရက်ဆာ စက်ချောဆီများ
Brake ၊ Suspension နှင့် Power Steering သုံးချောဆီများ
Copyright © 2019, UniStar Co., Ltd.